Munamato WeRuponeso rwevana | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Munamato WeRuponeso rwevana
Munamato WeRuponeso rwevana
Nhasi tichave tiri kubata nemunamato wekuponeswa kwevana. Rovedza mwana nzira yaanofanira kufamba nayo, Ipapo kunyange akwegura haangatsauki pairi.
Tinenge tichinamatira vana vedu. Kubwinya kuna Mwari kunodimbura pamunhu wega wega, vakaroorana vane vana uye vanofungidzira vakaroora, vasina kuroora avo vari kutarisira kuzadzikazve. Zvisinei nezvedu chimiro, isu tine chinhu chimwe chakafanana seVatendi anova Kristu.
Hatifanire kuva nehanya zvakanyanya nekutsvaga kwevana vedu mune zvedzidzo, zvishuwo zvavo zveramangwana, kudya kwavo, kugara zvakanaka nezvose zvine chekuita navo zvekuti tinokanganwa kutora mutoro wekurerwa pamweya kwavo.
Kusiya vana vedu kupesvedzero yekunze kunogona kukuvadza kupfuura kunaka. Kutarisa zvakanaka nzanga yatiri kurarama mairi nhasi. Nguva dziri kuchinja uye tekinoroji inoramba ichichinja nekukurumidza. Tinosangana nevabereki vanokatyamadzwa nehunhu hwevana vavo uye vanoshamisika kuti vangangosangana nepi uye kupi.
Sezvo Mwari anotipa simba mumabhizinesi uye anotipa isu kubudirira pabasa nekufamba kwenguva, kuti isu tinobereka michero mune zvemari, kukura kwavanoita, izvo zvavanoziva, izvo zvavari kudzidziswa kubva kumba zviri patiri.
Havafanirwe kusiiwa kunze panguva yekuzvipira kwemangwanani. Taura navo nezvaJesu. Vatorere vana zvinhu zvemubhaibheri. Ngavazive Mwari vari kumba. Mhedzisiro yeiyi iyo, kana paine hwaro hwakasimba, apo vana vanogona kunongedzera zvine simba kune rudo rwaMwari rwunodzidziswa nekuonekwa pakati pevabereki vavo, hapana chinokwanisa kuzunungusa hwaro rwezivo yavanayo.
Maitiro anoumba mumoyo yavo. Vabereki vanofanirwa kudzidzisa tsika dzakanaka dzinozosiya mucherechedzo usingakanganwike pavari. Iyo inoumba masarudziro avanosarudza shamwari dzavo muchikoro, zvinoumba maitiro avanoita nekusada humwari kunze. Sei? Nekuti vakadzidziswa uye vakadzidziswa kubva kumba.
Hatife takashaya zvekudzidzisa. Kune Hunhu hweBhaibheri hwekufunda, kuongorora uye kudzidza kubva. Mambo David, semuenzaniso, muite kuti azive kuti ndiani munhu wemuBhaibheri. Idzi ndidzo hurukuro dzinogona kuuya mumotokari, kudzoka kubva kuchikoro, panguva yavo yekuzorora, mushure mekudya nezvimwewo.Haizovi chinhu sezvo pasina nguva yehurukuro dzakadai, zvidimbu zvidiki pano uye pane mbeu dzaunodyara mwoyo yavo yaizokura kuita michero, nekufamba kwenguva. Ivo havafanirwe kubvunzwa kunze kwemusha kuti Esther ndiani anobva muBhaibheri uye ivo havana chinhu. Mukudzidzisa nekunamata, tiri kuisa vana vedu pane chaipo pedastal kuti vapfuure nehupenyu neushingi nekuti vakagadzirirwa.
JESU haafanire kuve zita risinganzwisisike kuvana. Bhaibheri rinonyora kuti Jesu akagamuchira vana panguva yehushumiri hwake wenyama.
Mako 10: 13-16
13 Zvino vakauya nevana vaduku kwaari, kuti avabate; asi vadzidzi vakatsiura avo vaiuya navo. 14 Zvino Jesu wakati achizviona, akatsamwa zvikuru akati kwavari: Tenderai vana vadiki vauye kwandiri; musavadzivisa, nokuti ushe hwaMwari ndohwevakadai.15 Zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Ani nani usingagamuchiri ushe hwaMwari semucheche, haangatongopindi mahuri. maoko ake ,, akaisa maoko pamusoro pavo, akavaropafadza.
Ita kuti vazive kuti Jesu anovada, uye kuti ane hanya navo. Vadzidzisei kuziva kuti Jesu aigara achivachengeta zuva nezuva.
Johane 3:16, ”Nokuti Mwari wakada nyika nokudaro, kuti wakapa Mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kufa, asi ave neupenyu husingaperi.
Dzidzisa nezve mabasa aJesu uye kuti mweya wavo wakaponeswa sei mukutenda zvaakavaitira. Bhaibheri rinoti Kutenda kunouya nekunzwa nekunzwa neShoko raMwari. Iro iShoko ravanonzwa kuti vachatora moyo.
Mabasa 4:12, "Hakunawo ruponeso kune mumwe; nekuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapihwa pakati pevanhu, ratingaponeswa naro." Dzidzisa vana nezveRuponeso.
Mat. 18: 3-4
Uye, Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, Kunze kwekuti mukatendeuka, mukava sevana vadiki, hamungapindi muumambo hwekudenga.
Jesu Kristu achitaura apa aitsanangura kuti moyo yevana inogona kuva yakapfava uye yakapusa kusiyana nevakuru vanogona kupa kuomarara pakubvuma Kunaka kwaIshe Wedu Jesu Kristu. Pfungwa dzemwana kubva pakuzvarwa idombo rakachena. Basa riri patiri rekuisa mubasa, kutaura navo nezvaJesu uye nerudo rwaBaba.
Simba rekuita zvese zvinodiwa kwatiri seVabereki uye Vabereki vane chinangwa, Ishe vachatipa Kwatiri muzita raJesu.
Ndiko kusaka zvakakosha kuvanamatira. Munamato unoshanda. Patinonamata, tinoona miuyo inoshamisa. Hareruya!
Baba tinokutendai nekuti pamusoro pedu, runako rwenyu uye Tsitsi dzenyu zvinogara nekusingaperi.
Baba tinokutendai nerudo rwenyu rwusingaperi pamhuri dzedu, maita henyu nekuti hapana chingatiparadzanise nerudo rwaBaba, muzita raJesu.
Baba muzita raJesu, tinonamatira vana vedu, tinotaura makomborero uye njere dzaMwari pamusoro pavo muzita raJesu.
Baba Vekudenga, tinokutendai nemaropafadzo evana vakanaka vatakatambira kubva kwamuri muzita raJesu.
Baba tinonamata kuti vana vedu vasvike pakuziva zviri nani, zuva nezuva.
Baba tinonamatira huchenjeri kuvana vedu, tinonamata kuti vasarudze zvakanaka, vaite zvakanaka panguva yakakodzera muzita raJesu.
Baba tinonamata kuti muvabatsire kuti vakure mukukuzivai zuva nezuva sekuda kwavo uye kushingairira kwavo kukuzivai kuchikura zuva nezuva muzita raJesu.
Baba muzita raJesu, tinonamata kuti moyo yevana vedu ipiwe kwamuri, ivo vapindure nerudo rwenyu nemazvo nezita raJesu.
Baba Vekudenga tinonamata kuti vana vedu vanunurwe kubva kune zvakaipa zvinokanganisa, kushamwaridzana nevakaipa nekambani isingadi Mwari. Ivo vanoita sarudzo chaiyo yeshamwari pane yega mamiriro ehupenyu hwavo muzita raJesu.
Baba Tenzi tinonamatira izwi roga roga rakadzidziswa, Mweya waMwari unozozvipa pamoyo yavo muzita raJesu.
Baba Tenzi, Kristu ngaagare achiumbwa muhupenyu hwevana vedu muzita raJesu.
Baba tinokutendai nembeu yega yega yakaenderera uye ichabuda kubva mudumbu medu, tinokutendai nekuti ndevenyu, tinokutendai nekuti munotora hupenyu hwavo kubva pakutanga kusvika kumagumo muzita raJesu rine simba.
Munamato wevana ruponeso
Previous nyayaKunamata Points Yenzvimbo Yakakwirira
inoteveraKunamata Kunongedzera Kupokana Nenjodzi Dzinongoitika
Vlvaro Ramos Kukadzi 7, 2021 At 7:53 am
50 Manheru Ehondo Hondo Minyengetero